FEELM = Waa sax Dareen + Fil Metallicm
FEELM waxay aad ujeceshahay hagaajinta uumiga qiiqa sigaarka qaangaarka ah ee leh tikniyoolajiyad iyo uumis casri ah. Marka la isku daro Filim Bir ah oo leh Maamulaha Ceramic, tiknoolajiyaddan kacaanku waa horumar laga gaadhay Qalabka Dhaqanka iyo Sayniska Dhismaha, oo matalaya xuduud cusub oo ku saabsan soo-saarista atomiga.
FEELM waxay sifiican ula jaanqaadaysaa Teknolojiyadda Fayadhowrka Filimka ee Nidaamka Xidhan ee Xidhan, oo u keenaya dhadhan weyn iyo waayo-aragnimo aan caadi ahayn u-u-raaxaysiga dadka e-sigaarka jecel, iyo sigaar cabbista dhabta ah ee dadka waaweyn ee sigaarka caba.
Tikniyoolajiyadda FEELM waxaa soosaaray 2016 shirkadda SMOORE International Holdings Limited (Stock Code: 6969.HK), shirkadda waalidka ah ee VAPORESSO, CCELL iyo METEX.
Caleen Dahab ah
Wadaag Suuqa Caalamka
• SMOORE ayaa la aasaasay
• La shaqeysay NJOY, oo la bilaabay KING
• Wada shaqeyn la leh Altria, oo la dhisay warshad gaar u ah MarkTen
• Xarunta R&D ee hogaamineysa Warshadaha, oo diirada saareysa Teknolojiyada Kuleylka Ceramic
• Waxay horumariyeen jiilkii 1aad ee dhoobada dhoobada T28
• Waxaa la aasaasay Machadka Cilmi baarista ee SMOORE Changsha
• Waxaa la daahfuray gariiradda T29 ee Birta Birta ah
• Waxaa la aasaasay Machadka Cilmi baarista ee SMOORE Shenzhen
• Iskaashi lala yeeshay RJ Reynolds, oo la bilaabay Vuse Alto
• Wada shaqeyn la leh BAT, oo la bilaabay Vype ePod
• Wada shaqeyn la leh RELX, oo laga bilaabay Shiinaha RELX Classic
• La bilaabay NJOY ACE
• Calaamadda ku dhawaaqida kuleylka Teknolojiyada ee FEELM, ayaa ku guuleysatay Abaalmarinta Caleemaha Dahabka ah
• Qiyaasta iibka ee FEELM gudaha jiingadaha waxay dhaaftay 100 Milyan
• Waxaa laga sii daayay "FEELM gudaha" Astaanta Aqoonsiga Teknolojiyada Caalamiga ah
• Waxay wada dhisteen Warshadda Gaarka ah ee E-cig ee Dunida leh RELX
• Awoodda wax soo saar ee FEELM gudaha jiingadaha waxay dhaaftay 1 Bilyan oo gogo '
• Teknolojiyada Kuleylka Ceramic waxay heshay Abaalmarinta 1aad ee Shahaadada Sare ee Shiinaha ee warshadaha
• Xarunta Gorfaynta iyo Imtixaanka QIIMO BADAN waxay ka gudubtay imtixaankii qiimaynta CNAS
• Waxaa la aasaasay Machadka Cilmi baarista ee Tangshan SMOORE
• SHAQO ku qoran HKEX (koodhka kaydka: 6969.HK)
• Wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta IF 2020
• Waxaa lagu codsadey in ka badan 1600 shatiyada adduunka
Waxaa la aasaasay 2006, SMOORE International Holdings Limited waa shirkad farsamo heer sare ah oo caalami ah iyo hogaamiye caalami ah oo caan ah oo bixiya xalalka tikniyoolajiyadda atomiga. Waxay ku takhasustay tikniyoolajiyadda atomiska iyo sidoo kale horumarka, soo saarista iyo iibinta kaareyaasha dhoobada.
SMOORE waxay muhiimad weyn siinaysaa R&D iyo hal-abuurnimada. Iyada oo xubnaha aasaasiga ah ay ka qalin jabinayaan jaamacadaha ugu sareeya sida Georgia Institute of Technology, Jaamacadda Purdue, Jaamacadda Tsinghua, iyo Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska, SMOORE hadda waxay leedahay in ka badan 1600 shatiyada adduunka oo dhan, oo ka kooban dhowr goobood sida qalabka wax lagu duubo iyo qalabka elektroonikada.
Waad ku mahadsantahay tiknoolajiyada atomization-ka, alaabooyinka SMOORE waxay heleen WM, RBA, EICC, BSCI, GMP, cGMP iyo shahaadooyinka TUV waxaana loo dhoofiyey in ka badan 50 dal iyo aagag adduunka oo dhan. Sii wadida bixinta alaab iyo adeeg tayo sare leh, SMOORE wuxuu noqday madal tiknoolajiyad atomis ah oo hogaamisa aduunka, si balaaranna loo aqbalo loona fadilay dadka isticmaala dhamaadka.
Iyadoo la tixgelinayo tiknoolajiyada sare ee R & D, awoodda wax soo saar xoog leh, faylalka badeecadaha kala duwan iyo saldhigyada macaamiisha kala duwan, sida laga soo xigtay Frost & Sullivan, SMOORE wuxuu ahaa soo saaraha aaladda ugu weyn ee adduunka ee dakhliga, oo u dhiganta 16.5% wadarta guud ee suuqa, sanadka 2019.
Sigaar kuleylka, E Sigaarka Uumiga Liibiya, E Xidhmada Sigaarka Bacaha, Sigaar Cabbida, Epen, Newport E Sigaar,